OS X အတွက် 'DesktopChat for Whatsapp' ကိုရနိုင်သည် ငါက Mac ပါ
OS Desktop အတွက် DesktopChat for Whatsapp ရနိုင်သည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac က App Store ကို, Mac ပရိုဂရမ်များ, အတော်ကြာ
'DesktopChat for Whatsapp' ဒါဟာများအတွက် application ဖြစ်ပါတယ် OS X ကိုWhatsApp ကိုသင်၏ Mac တွင်တိုက်ရိုက်သုံးခွင့်ပြုသည်။ ထိုအပလီကေးရှင်းသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်က Mac App Store တွင်ပေါ်လာသည်။ လျှောက်လွှာသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းအကောင်းဆုံးမှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ယုတ္တိနည်း တရားဝင်လျှောက်လွှာမဟုတ်ပါ WhatsApp, ဒါပေမယ့်တတိယပါတီအက်ပ်။ DesktopChat for Whatsapp ကိုအခမဲ့ download ရသည်။ သို့သော် app အတွင်း၌သာဖြစ်သည် ရက် ၃၀ သာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်.
၎င်းသည်အသံမှတ်စုများပေးပို့ခြင်းကိုလောလောဆယ်အထောက်အပံ့မပေးသော်လည်းသင်၏ Mac ပေါ်တွင် WhatsApp ကိုအသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကပါ Whatsapp မရ ကွေးနနျးစာ ဒါကမင်းရဲ့စံပြလျှောက်လွှာတစ်ခုပဲ။ ငါထပ်မံမှတ်ချက်ပေး, လျှောက်လွှာအခမဲ့ပေမယ့်တ ဦး တည်းသာရှိပါတယ်, သော ရက် ၃၀ သရုပ်ပြပုံစံနောက်မှကြိုက်လျှင်ကော သငျသညျအစဉျအမွဲအသုံးပြုရန်ဝယ်နိုင်ပါတယ်.
အသုံးပြုပါ WhatsApp အတွက် DesktopChat'သင်၏ desktop ပေါ်တွင်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
အပြည့်အဝသဟဇာတ Yosemite y အယ်လ် Capitan.
WhatsApp ကို Desktop မှတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း။
သင်လုပ်နိုင်သည် download, သင်၏ desktop သို့တိုက်ရိုက်ပို့သောဖိုင်များ။
အသေးစိတ် WhatsApp အတွက် DesktopChat':
စြေးအခမဲ့ (ရက် ၃၀ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကာလ) ။
တင်ပါတယ်: 09/12/2015 ။
ဗားရှင်း: 1.0 ။
ကုန်ချ 'DesktopChat for Whatsapp' အောက်ပါလင့်ခ်မှ Mac App Store မှလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » OS Desktop အတွက် DesktopChat for Whatsapp ရနိုင်သည်
၎င်းသည် ChitChat ၏ပါးနပ်သောမိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည်၊
ဤဆော့ဖ်ဝဲရေးသူသည်မိမိ၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ မရထိုက်ပါ။
သင်လုံးဝမှန်ပါသည်၊ ၎င်းသည် ChitCchat ၏မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယရှေု Arjona Montalvo ဟုသူကပြောသည်
Jesús Arjona Montalvo အားစာပြန်ပါ
Leon ဗီလာ ဟုသူကပြောသည်
WhatsApp ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့သည်ကော်ပီများနှင့်တူသည်။ ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကပိုကောင်းသည်။
Leon Villa သို့ပြန်သွားပါ
Photo Collage Make Pro သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်
Taylor Swift ၏ "World Tour LIVE" ရုပ်ရှင်သည် Apple Music အတွက်သီးသန့်ကြေငြာခဲ့သည်